5 Kuhle Winter Izikhumulo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Winter Izikhumulo EYurophu
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
IYurophu inenye futhi ikhubalo ezithile ebusika phakathi nezinyanga ezibandayo ukuthi abafani nanoma yiziphi indawo emhlabeni. Kukhona okuningi ezihlukahlukene, futhi akukho izindawo ezimbili babe nomuzwa ofanayo kanye nomkhathi. Empeleni, abantu abaningi bathi emadolobheni phakathi nezinyanga ezibandayo uzizwe sengathi beya entsha okuyiwa kuyo. Winter unekhono kumnandi okuguqula Europe ngokuphelele, bese, dala isipiliyoni esisha ngokuphelele sezivakashi abangakwazi ukusithola nganoma yisiphi esinye isikhathi sonyaka. I iqhwa eliwayo kuhambisana eziningi imisebenzi ebusika namaholide ezibalulekile ukwakheka konke Festive kakhulu. Naphezu kobuningi izinguquko nobuhle, akunakwenzeka ukuvakashela konke. Uma ufuna uuku ngcebeleka amanye ethandwa kakhulu travel izindawo, ziyangena kulezi 5 izindawo ebusika e-Europe.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Londoloza Isitimela I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
1. Winter Izikhumulo EYurophu: Budapest, Hungary
Uma ufuna Winter Wonderland ukuthi kuyokwenza mangaza nawe, ke ubhekisise Budapest. Kuyinto idolobha ephelele yokubaleka ebusika. Esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi abantu abaningi bakhetha Budapest kuyinto amanani ezingabizi. Uthola ukuzwa edolobheni lovely kusilinganiso okungabizi. Budapest ngokuvamile egcwele izivakashi ngesikhathi sasehlobo. Nokho, ebusika, uthola ukubona ngobuhle baleli dolobha kwezixuku sakugcina. Ngaphandle kwalokho, uthola amakhekhe amaningi eshimula newayini elihlwabusayo.
Ibhonasi lwekwengeta emangalisa Margaret Island. Kufana indawo elungile ukuvakashelwa uma ufuna ukuba i amaqhawe Snowball ukulwa. Baningi bendawo kanye izivakashi zihlangana nabangani babo futhi ujabulele iqhwa. Uma Snowball izimpi akuzona ngawe, sesijabulela ngezicathulo phambi castle! Budapest City Ipaki iba rink eqhweni ukushushuluza ebusika. Uma usuqedile ukudlala eqhweni, ungakwazi udlulele zokugeza. Amazing Gellert spa liyindawo enkulu ukuba nomusa futhi ujabulele ezinye amanzi ezishisayo.
Venice kungenzeka kungabi into yokuqala okumele efika engqondweni lapho Ucabanga Ubusika-European. Nokho, uma yokuya edolobheni yemiselekazi ebusika, wena uyokukhumbula kuze kube phakade. Imigwaqo aminyene nezindawo zokudlela ezinhle ezinomsindo kuthiwa toned phansi, futhi ubona thimu of dolobhakazi ukuthi ihlobo ayikwazi ukubonisa. Zonke umsindo befuna nezinyanga zasehlobo kufakwa a ezolile futhi umoya serene ukuthi uphelele ukungcebeleka ebusika. Nokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi idolobha kuza ekuphileni ngokushesha kakhulu lapho Venice Carnival imiqulu emhlabeni. Njalo Februwari, edolobheni uthola kuqubule izivakashi, kanye buso ezihlotshisiwe ukugcwalisa emigwaqweni edolobheni. zokubhukuda ekuticambela abadansi emigwaqweni ukuletha ngomlando walo muzi ezimibalabala ekuphileni. Uma ufuna ebusika emnandi awusoze ukhohlwe, ukubeka Venice ohlwini lwakho.
3. Winter Izikhumulo EYurophu: Paris, France
France uhlobanisa iningi labantu cuisine esiphundu futhi izizinda romantic. Nokho, izwe liba ebukekayo nakakhulu lapho imiqulu ebusika emhlabeni, ikakhulukazi inhlokodolobha. IParis emangalisa kungakhathaliseki ukuthi isikhathi sini sonyaka uvakasha khona. Ngeshwa, abantu abaningi ukuzwa ke ngenkathi ukubanda. Paris, emzini uthando futhi romance, liqinisekile sokujabulisa futhi agcizelele uma musa khumbulani egqoke ijazi efudumele nezinye izingubo ebusika. Samaholidi kuletha Paris ekuphileni. Izivakashi ngeke nje uthole ukuba izitike Ukudla okumnandi newayini imikhosi. Nokho, liphinde isikhathi ephelele ukubona izenzakalo efana UMkhosi Wonderful at Musee des Arts Fairground kanye Lights Festival ngesikhathi Jardin des Plantes.
Hlola izimakethe idolobha kanye ezitaladini ehlotshisiwe, ngenkathi uthatha e ubuhle edolobheni. Winter yisikhathi ephelele ukuthatha uhambo eduze Seines amabhange noma ulahleke ezitaladini Le Marais. Uma ubona ukuthi, ungakwazi pop ibe cafe waseParis labangela ukuqala komkhakha futhi ujabulele isiphuzo omuhle. Uma lokho kwenziwe, ungabona zonke ezikhangayo esemqoka Paris ngemigqa okumbalwa.
Nakuba izinkulungwane izivakashi zithuthelekela Austria unyaka wonke, kukhona esithile nokuzwakala Fairytale ebusika. Zonke emadolobheni amancane namakhulu ezweni eyezinto enchanting okungukuthi ngempela esiyingqayizivele. Kukhona kweqhwa ngokuvamile abalulekile kusukela November kuya kuMashi. Lokhu kusho ukuthi abathandi iqhwa uqiniseka adore Ubusika Austria. Uma ufuna ukuzwa okushiwo i ebusika Austria, ukuvakashelwa Vienna. Lokhu dolobha grand idume nomoya walo zemikhosi futhi isici izingubo. Uma isimo kwabanye yezitolo ebusika, qiniseka ukuvakashela izimakethe kaKhisimusi. Vienna has ezinye izimakethe ethandwa kakhulu e yonke iYurophu. Izivakashi bajabulela okumnandi cuisine Austrian bese bephuza kancane iwayini mulled. Ngaphandle kwalokho, zikhona izinto ezihlukahlukene ngezandla futhi esihlwabusayo ushokoledi awukudla.
5. Winter Izikhumulo EYurophu: Interlaken, Switzerland
Uma umuntu ngesenzo ungeke ucabange kokuchitha isikhathi edolobheni for the holiday ebusika, ke Interlaken e-Switzerland iyona uya khona ebusika ngawe. Ngokungafani ethandwa, big izindawo edolobheni, Interlaken Iyidolobhana resort eduze Alps. Izinkulungwane skiers kanye snowboarders wenze indlela yabo ukuba Interlaken zonke ebusika futhi balisebenzise landscape Amazing endaweni izipesheli. Interlaken ine wonke zombili. Okokuqala, ukusondela futhi ukufinyelela elula emangalisayo imisebenzi entabeni. Okwesibili, inikeza konke eyodwa obengafuna uma kuziwa izindawo. Kungakhathaliseki ukuthi ujabulele ukukhanya, noma ufuna ukuhlola kwemikhawulo yakho ezindleleni kakhulu, Interlaken ukuphi. Kungakhathaliseki umbono wakho fun kuyinto, uyojabula ukwazi ukuthi ungenza indlela yakho emuva edolobheni futhi ujabulele ezinye fondue.
IYurophu inenye futhi kunokuthile kwawo wonke umuntu. Kukithi ukuba unqume ukuthi yini ebusika yakho Wonderland ifana kanye nokusetshenziswa Londoloza Isitimela ukuze uthole khona. Kuningi ongakuthola ezinyangeni zasebusika, ngakho-ke yenza okuhle futhi uthathe igxathu eliya phambili.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Winter Izikhumulo EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dzu – (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
europetravel trainjourney amathiphu isitimela travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland ukunqunyelwa ebusika izindawo zasebusika ukuhamba ebusika